किन युक्रेनलाई धम्की दिइरहेछ रुसले ? ऊ नाटोबाट के चाहन्छ ? | Online Nepal
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले युक्रेनमा सैन्य कारबाही हुने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । बाइडेनले बुधबार भनेका थिए कि उनले रुसी समकक्षी भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेनमा ‘हस्तक्षेप’ गर्नेछन्, तर ‘पूर्ण युद्ध’बाट बच्न चाहन्छन्। वास्तवमा, उसलाई रूसी सेना द्वारा ‘सानो हस्तक्षेप’को डर छ।
तर, बाइडेनको बयानपछि युक्रेनमा उनको आलोचना भएको थियो । त्यस पछि, बिहीबार दिएको भाषणमा राष्ट्रपति बिडेन आफ्नो पहिलेको भनाइबाट पछि हटेका थिए। र उनले युक्रेनमा कुनै पनि रूसी सैन्य घुसपैठलाई ‘आक्रमण’ मानिने बताए।
यहाँ बेलायती विदेश मन्त्रालयले रुसले युक्रेनमा त्यसलाई समर्थन गर्ने नेता चाहेको बताएको छ । चार पूर्व युक्रेनी नेताहरूको नाम जारी गर्दै, मन्त्रालयले भने कि यी नेताहरूको रूसी गुप्तचरसँग सम्बन्ध छ र रसियाले उनीहरूलाई सम्भावित उम्मेद्वारको रूपमा हेरिरहेको छ।
रुसबाट बेलायत र अमेरिकाले लगाएको आरोपलाई झुटो र मिथ्या भनिएको छ ।
उल्लेखनीय कुरा के छ भने रुसले युक्रेनलाई लिएर पश्चिमी देशहरूसामु धेरै माग राखेको छ । युक्रेनलाई कहिले पनि नाटोको सदस्य बन्न दिनु हुँदैन र नाटो गठबन्धनले पूर्वी युरोपमा हुने सबै सैन्य गतिविधि त्याग्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
-आखिर रुसले युक्रेनलाई किन धम्की दियो ?
युक्रेनी सीमामा १,००,००० भन्दा बढी परिचालन गरे पनि, रूसले आक्रमण गर्ने कुनै योजनालाई अस्वीकार गरेको छ। रूसले लामो समयदेखि युरोपेली संस्थाहरू, विशेष गरी नाटोसँग युक्रेनको संलग्नताको विरोध गर्दै आएको छ।
युक्रेनको पश्चिममा युरोपेली देशहरू र पूर्वमा रुससँग सिमाना छ। यद्यपि पूर्व सोभियत संघको सदस्य र जनसंख्याको छैटौं भाग रूसी मूलको भए पनि, युक्रेनको रूससँग गहिरो सामाजिक र सांस्कृतिक सम्बन्ध छ।
सन् २०१४ मा युक्रेनले रुस समर्थक राष्ट्रपतिलाई उनको पदबाट हटाएपछि रुसले दक्षिणी युक्रेनको क्रिमिया प्रायद्वीपलाई गाभेको थियो ।
एकै समयमा, उनले त्यहाँ पृथकतावादीहरूलाई आफ्नो समर्थन विस्तार गरे, जसले पूर्वी युक्रेनको ठूलो भाग कब्जा गरे। त्यसयता रुस समर्थक विद्रोही र युक्रेनी सेनाबीचको भिडन्तमा १४ हजारभन्दा बढी मानिस मारिएका छन् ।
-आखिर आक्रमणको खतरा कति ठूलो छ?
रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गर्ने आफ्नो कुनै योजना नभएको बताउँदै आएको छ । रुसी सेना प्रमुख भ्यालेरी गेरासिमोभले आक्रमणको योजनाबारे आएको रिपोर्टलाई ‘झूटा’ भनेका छन् ।
तर दुई पक्षबीच तनाव उत्कर्षमा छ । रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले पश्चिमी शक्तिहरूको आक्रामक व्यवहार जारी राखेमा “उचित प्रतिशोधात्मक कदमहरू” लिने चेतावनी दिएका छन्।
नेटोका महासचिवले युक्रेनमा द्वन्द्वको खतरा वास्तविक भएको चेतावनी दिएका छन् । अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले पनि रुस अगाडि बढ्न सक्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । अमेरिकाले युक्रेनी सीमामा रुसी सेना जम्मा गर्ने “छोटो समय” को लागि कथित योजना बारे सचेत रहेको बताएको छ।
युक्रेनको सिमानामा १० लाखभन्दा बढी रुसी सैनिक जम्मा हुनु चिन्ताको विषय हो । रुसले यस सैन्य भेलाको बारेमा कुनै स्पष्टीकरण नदिएको अमेरिकाले जनाएको छ । योसँगै अब रुसी सेना पनि अभ्यासका लागि बेलारुसतर्फ गइरहेको छ ।
रुसी उपविदेशमन्त्री सर्गेई र्याबकोभले हालको अवस्थालाई सन् १९६२ को क्युवाली क्षेप्यास्त्र संकटसँग तुलना गरेका छन् । त्यो बेला अमेरिका र सोभियत संघ आणविक द्वन्द्वको नजिक पुगेका थिए ।
पश्चिमी गुप्तचर एजेन्सीहरू विश्वास गर्छन् कि युक्रेनमा रूसको आक्रमण 2022 को शुरुमा हुन सक्छ।
-रुस NATO बाट के चाहन्छ ?
रुसले नाटोसँगको आफ्नो सम्बन्धलाई नयाँ आकार दिन आफ्नो अडान राखेको छ। रुसका उप-विदेशमन्त्री सर्गेई र्याबकोभले भने, “युक्रेन कहिले पनि नाटोको सदस्य बन्नु हुँदैन भन्ने निर्णय गर्नु हाम्रो लागि धेरै महत्त्वपूर्ण छ।”
रुसले नाटो देशहरूले युक्रेनलाई लगातार हतियार आपूर्ति गरिरहेको आरोप लगाएको छ र अमेरिकाले दुई देशबीच तनाव उत्पन्न गराएको छ। राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले भनेका छन्, “रुस अब पछि हट्ने छैन। हामी यसरी बसिरहने के सोच्नुहुन्छ?”
वास्तवमा, रूसले नेटो सेनाहरू 1997 अघि जस्तै सीमाहरूमा फर्कन चाहन्छ। यसको माग नाटो गठबन्धनले अब पूर्वमा आफ्नो सेना विस्तार नगर्नु र पूर्वी युरोपमा आफ्नो सैन्य गतिविधि रोक्नु पर्छ।
रुसले अमेरिकासँग एउटा सम्झौता गर्ने प्रस्ताव पनि गरेको छ जसअन्तर्गत उसले आफ्नो देशको क्षेत्रबाहिर आणविक हतियार तैनाथ गर्न प्रतिबन्ध लगाउनेछ।
-युक्रेनसँग रुसको माग के छ ?
रुसले 2014 मा क्रिमियालाई गाभेको थियो र भनिन्छ कि यो प्रायद्वीपमा ऐतिहासिक दाबी छ। युक्रेन सोभियत संघको एक हिस्सा हो।
एकै समयमा, भ्लादिमिर पुटिनले 1991 मा सोभियत संघको पतनलाई ‘ऐतिहासिक रूसको विघटन’ को रूपमा सम्झाउँछन्।
गत वर्ष एक लामो लेखमा उनले रुसी र युक्रेनीहरूलाई “एउटै राष्ट्रियताका” भनेका थिए। यसले पुटिनको सोचलाई उजागर गरेको विज्ञहरू विश्वास गर्छन्। उक्त लेखमा पुटिनले युक्रेनका वर्तमान नेताले ‘रुस विरोधी परियोजना’ चलिरहेको पनि बताएका छन् ।
-रुसको सैन्य कारबाही रोक्न सकिन्छ ?
रुसी राष्ट्रपति पुटिनले धेरै पटक जो बाइडेनसँग अन्य उच्चस्तरीय वार्ता जारी राख्नु पर्ने बताएका छन्। यद्यपि, रूसी अधिकारीहरूले चेतावनी दिएका छन् कि तिनीहरूका मुख्य मागहरू अस्वीकार गर्दा गम्भीर परिणामहरू हुनेछन्।
-अब प्रश्न उठ्छ, रूस कति टाढा जान्छ ?
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले युक्रेनमाथि ‘पूर्ण आक्रमण’ गरे रुसका लागि नराम्रो परिणाम हुने चेतावनी दिएका छन् । तर, बिडेन आफैले रुसको “सानो हस्तक्षेप” मा भने कि यसले “यसलाई कसरी व्यवहार गर्ने भन्नेमा पश्चिमी देशहरू बीच असहमति” निम्त्याउन सक्छ।
ह्वाइट हाउसले जोड दियो कि रूस र युक्रेन बीचको सीमामा कुनै पनि कारबाहीलाई आक्रमण मानिनेछ, तर रसियासँग साइबर आक्रमण र अर्धसैनिक कारबाही जस्ता अन्य उपायहरू पनि छन् भनेर उल्लेख गरे।
रुसले विद्रोही नियन्त्रित क्षेत्रमा 500,000 राहदानीहरू वितरण गरेको आरोप पनि लगाइएको छ, ताकि यदि आफ्नो मनसाय पूरा भएन भने आफ्ना नागरिकहरूको सुरक्षाको आडमा कुनै पनि कार्यलाई जायज ठहराउन सक्छ।
अमेरिकी उप-विदेशमन्त्री वेन्डी शर्मनले भने, “हामी कसैलाई नेटोको ‘खुला ढोका नीति’ लाई धक्का दिन दिनेछैनौं।”
अर्कोतर्फ युक्रेनले नाटोमा सामेल हुनको लागि स्पष्ट समयसीमा खोजिरहेको छ र नाटोले पनि रुसलाई यस प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्ने कुनै भिटो वा अधिकार नभएको बताएको छ।
स्वीडेन र फिनल्याण्ड, जो NATO का सदस्य छैनन्, पनि NATO सँगको सम्बन्धलाई गहिरो बनाउन रुसले गरेको प्रयासलाई अस्वीकार गरेका छन्। फिनल्याण्डका प्रधानमन्त्रीले भने, “हामी चालबाजीलाई स्वीकार गर्दैनौं।”
-पश्चिमी देशहरूले युक्रेनलाई कति हदसम्म समर्थन गर्ने?
अमेरिकाले युक्रेनलाई आफ्नो “सार्वभौमसत्ता” सुरक्षित गर्न सहयोग गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताएको छ। उसले युक्रेनलाई हतियारको रुपमा सैन्य सहयोग पनि गरिरहेको छ ।
तनाव कम गर्ने पश्चिमी देशहरूको मुख्य हतियार हतियार र सल्लाहकारको रूपमा ‘प्रतिबन्ध’ र ‘सैन्य सहायता’ हो।
अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले रुसलाई युक्रेनमा आक्रमण गरेमा कहिल्यै नदेखेको न सुनेको प्रतिबन्धको सामना गर्नुपर्ने चेतावनी दिएका छन् । तर यस्तो प्रतिबन्ध के हुन सक्छ?
रूससँग पनि गर्न सकिने अर्को कठोरता भनेको जर्मनीमा रुसको नर्ड स्ट्रिम २ ग्यास पाइपलाइनको कामलाई रोक्नु हो। जर्मनीले यसलाई अनुमोदन गर्न विचार गरिरहेको छ। जर्मनीका विदेशमन्त्री एनालेना बेर्बोकले रुसले कुनै सैन्य कारबाही गरेमा यो पाइपलाइनको काम सुरु नगर्ने स्पष्ट पारेकी छिन् ।
रुसी प्रत्यक्ष लगानी कोष वा रुबललाई विदेशी मुद्रामा रूपान्तरण गर्ने बैंकहरूलाई प्रतिबन्ध लगाउने कदमहरू पनि अपनाउन सकिन्छ।
-के पश्चिमी सेनाहरू मिलेर काम गर्नेछन्?
अमेरिकाले आफ्ना सहयोगीहरूसँग मिलेर काम गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताएको छ तर अमेरिका र युरोपेली देशहरूबीच मतभेद रहेको छ ।
रुसले अमेरिकासँग एक्लै मिलेर आफ्नो भविष्यको निर्णय गर्न नसक्ने युरोपेली नेताहरूले जोड दिएका छन् । फ्रान्सले युरोपेली शक्तिहरूले नाटोसँग मिलेर रुससँग वार्ता गर्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव राखेको छ।
युक्रेनका राष्ट्रपतिले यस संकटको समाधान खोज्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन बोलाउन चाहन्छन्, जसमा रुससँगै फ्रान्स र जर्मनी पनि सहभागी हुनेछन्।
यी चार देशका नेताहरू नियमित रूपमा भेट्दै आएका छन्, जसलाई नर्मन्डी क्वाट्रेट वा ‘नर्मन्डी क्वार्टेट’ भनिन्छ। तर राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेनमा कुनै पनि सम्झौता नेटोसँग सम्बन्धित आफ्ना मागहरू स्वीकार गरे मात्रै हुने माग गरिरहेका छन्। बिबीसी हिन्दी
मारिउपोलका अधिकांश भूभाग रुसी सेनाद्धारा कब्जा, स्टिल कारखानामा फसेका नागरिकको उद्धार
युक्रेनमा बस दुर्घटनामा परी १६ जनाको मृत्यु
पश्चिम युक्रेनमा बस, कार र ट्रक ठोक्किए, १७ जनाको मृत्यु
रुसद्वारा फेरि युक्रेनको मरिउपोलमा रहेको स्टिल उद्योगमा आक्रमण
रुसी कमान्ड सेन्टरमा आक्रमण, दुई सय रुसी फौज मारेको युक्रेनको दाबी